Coronavirus: Maxaa qabsaday ninkii la kulmay qofkii ugu horreeyay ee coronavirus looga helay Nigeria? |
Coronavirus: Maxaa qabsaday ninkii la kulmay qofkii ugu horreeyay ee coronavirus looga helay Nigeria?
Maalmo yar kaddib markii ay Nigeria ku dhawaaqday qofkii ugu horreeyay ee coronavirus looga helay dalkaas, waxaa baraha bulshada ku faaftay sheeko layaab leh.
Warka la faafiyay waxaa lagu sheegayay in darawalkii gaarigiisa ku qaaday qofka bukaanka ah uu dalbaday lacag, si uusan u faafinin cudurka, arrintaasina waxay abuurtay caro badan oo ay muujiyeen dadka reer Nigeria.
Sheekadan waxay ahayd mid been abuur ah, laakiin saameynta ay ku yeelatay Jude Ikuenobe, oo ahaa ninkii sawirkiisa loo isticmaalay warka aan saxda ahayn aad bay run u ahayd.
Wuxuu mar qura waayay nabadgalyadiisii, waxaana billowday farriimo isdabajoog ah oo loogu hanjabayay in la dili doono.
Xitaa wuxuu ku dhawaaday inuu noloshiisa soo afjaro, oo uu isdio.
Hase yeeshee sheekada darawalkan waxay hal tusaale uun u tahay tobannaan sheeko oo noocaas ah oo ku faafay gudaha Nigeria, tan iyo markii uu dillaacay coronavirus.
BBC-da ayuu la hadlay Jude Ikuenobe, wuxuuna muujiyay dhibaatada kasoo gaartay arrintaas.
Dhinaca kale wuxuu isku dayayaa inuu dadka gaarsiiyo farriintiisa.
“Ma jiro qof doonaya inuu ii soo dhawaado, waxaan dadweynaha u sheegayaa in qofka la sheegayo aanan aniga ahayn, sawirkeygana si khaldan loo adeegsaday”, ayuu yiri.
Markii ugu horreysay ee uu Jude sheekadan arkay qudhiisa aad buu uga argagaxay.
“Si caadi ah ayaan khadka internet-ka u galay, waxaana arkay sawirkeyga oo warka ku jira, oo lagu tilmaamayo inuu yahay darawalka la eedeynayo ee gaarigiisa kusoo qaaday bukaanka ka yimid Talyaaniga, una kala safriyay magaalada Lagos ilaa gobolka Ogun”, ayuu yiri.
Sawirka loo adeegsaday baraha bulshada ee lagu lifaaqay warka been abuurka ah wuxuu ahaa mid laga soo qaatay maqal ay horay u qortay warbaahinta Buzzfeed, waxaana looga hadlayay khibradda Jude Ikuenobe ee ku aaddan adoonsiga casriga ah.
“Arrin argagax ah ayey igu noqotay, sababtoo ah magaceygu ma aha Adewaale Isaac Olorogun. Laakiin sawirka wuxuu ahaa keyga,” ayuu yiri Jude.
Dadka qoraallada uga falcelinayay sawirkaas iyo qormada sharraxeysay ayaa muujinayay cadaawad weyn.
“Aragti halagu toogto”, ayuu yiri qof ka mid ah.
“Aashito halagu shubo”, ayuu yiri mid kale.
“Dhagax halagu weeraro”, ayaa sidoo kale ka mid ahayd faallooyinka.
Jude wuxuu sheegay in uusan gurigiisa bannaanka uga bixi karin ilaa ay raacaan saaxiibadiis ama xubno ka tirsan qoyskiisa, si ay uga difaacaan ciddii waxyeello la damacda.
“Arrintan waxay igu kalliftay inaan ku dhawaado inaan nafteyda dilo, ciriir weyn ayaan dareemay”, ayuu yiri.